Precious Beauty | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Precious Beauty | Dagon
Spa / Hair Saloon / Nail
Precious Beauty Saloon ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်​ခန့်​ကတည်းက စတင်​ဖွင့်​လှစ်​ခဲ့​တာဖြစ်​ပြီး ဗိုလ်​ရာညွန့်​လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်​တွင်​ ဖွင့်​လှစ်​ထားပါသည်​။ ဆိုင်​ဖွင့်​ချိန်​မှာ နံနက်​ ၉နာရီမှ ည၉နာရီထိ ဖြစ်​သည်​။ ဆိုင်​တွင်​ရရှိနိုင်​​သော ဝန်​​ဆောင်​မှုများမှာ မျက်​နှာ​ပေါင်းတင်​ခြင်း ၊မျက်​နှာ​ဆေးခြင်း ၊ ​ခေါင်း​လျှော်​ခြင်း၊ ညှပ်​ခြင်း၊ လက်​သည်းအလှပုံ​ဖော်​ခြင်း ၊နှိပ်​နယ်​ခြင်းနှင့်​ မိတ်​ကပ်​ လိမ်းခြယ်​ခြင်း၊ waxing နှင့်​ မျက်​ခုံးကို အပ်​ချည်​ကြိုးဖြင့်​ထိုး၍ ပုံ​ဖော်​​ပေးခြင်း စသည်​တို့ကို စိတ်​တိုင်းကျစွာ ​ဆောင်​ရွက်​​ပေး​နေပါသည်​။ လူကြိုက်​အများဆုံး ဝန်​​ဆောင်​မှုများမှာ မျက်​ခုံးကို အပ်​ချည်​ကြိုးဖြင့်​ထိုး၍ ပုံ​ဖော်​ခြင်းနှင့်​ waxing လုပ်​ခြင်းများ စသည်​တို့ဖြစ်​ပါသည်​။ အမျိုးသား​ရော အမျိုးသမီးပါ ဝန်​​ဆောင်​​ပေး​နေပါသည်​။ မြန်​မာများသာမက နိုင်​ငံခြားသားများပါ အထူးသ​ဘောကျ အား​ပေး​သော Beauty Saloon ဖြစ်​ပါသည်​။
Spa | Hair Saloon | Nail
42, E1, Bo Yar Nyunt Street, Dagon
Precious Beauty Saloon is established since in 2005, which is located in Bo Yar Nyunt Street, Dagon Township, Yangon. This saloon provides Hair treatments , Facial treatments ,Make-up service, Body Massage, waxing, Nail arts and eye brow ''threading ''. Their recommended services are waxing and threading in there. Both ladies and gent can make. Average charges of minimum price for Hair treatment is 2000 kyats and maximum price for another service is 50000 kyats enough. Also the settings, the modernize style decor with air conditioned inside. Most of customers are foreigners as well as. So we are warmly welcome to you for your satisfaction and relaxation.
Those Nails ( Dagon Branch )
Nail, Eye Beauty
Lips Fitness ( Dagon )